के-के हुन् मधेसका माग ? शीर्षदलका नेता पनि यसबारे अन्योलमा - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं, असोज ६ । मधेसमा जारी आन्दोलनका प्रमुख माग के के हुन्? धेरैलाई थाहा छैन। स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका नेता पनि यसबारे अन्योलमा छन्। तराई–मधेसमा सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा ठानिए पनि भित्री रुपमा मागको फहरिस्त लामो छ।
विश्वस्त स्रोतअनुसार आन्दोलनरत दलका विभिन्न पक्षले त्यस्ता मुद्दा बार्गेनिङका रुपमा अघि सारिरहेका छन्। त्यसो त संविधान घोषणाको अघिल्लो दिन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एस. जयशंकरले समेत राजनीतिक दलका नेतालाई यिनै माग प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
स्रोतका अनुसार संविधानमा प्रदेश नम्बर १ मा राखिएका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नजिकको ‘मधेस प्रदेश’ मा गाभिनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठेको छ।
तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनरत पक्षले त्यसका यस क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक बनाउन खोजेका छन्। त्यसका लागि ‘मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातमा सिट छुट्याइनुपर्ने’ माग अघि सारिएको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २१ मा समावेशी प्रतिधित्वको स्थानमा ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ राख्न उनीहरुको जोड छ।
स्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका सीमाकंन पुनावलोकन २० वर्षमा गर्ने संविधानको धारा २८१ को व्यवस्था घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। त्यसैगरी, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचन र तीन जना मनोनीत हुने व्यवस्थाको साटो जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्न उनीहरुले जोड दिइरहेका छन्।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई स्वीकार्नुपर्छ – अध्यक्ष थापा